Korea atsimo-Taiwan ny fifandraisana - Mpisolovava Korea an-tserasera. Koreana Mpisolovava, ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Korea atsimo-Taiwan ny fifandraisana
Ny Repoblikan'i Shina ny governemanta fantatra amin'ny fananganana ny Governemanta vonjy maika ny Repoblikan'i Korea tamin'ny aprily, ho iray amin'ireo mpandray anjara ao Kairo ny Fihaonambe, izay niafara tamin'ny Fanambaran'i KairoIray ny tanjona lehibe ny Kairo Fanambarana dia mba hamorona ny tsy miankina Korea, maimaim-poana avy amin'ny Japoney fanjanahan-tany ny fitsipika.
Roa momba ny fifandraisana ara-diplaomatika eo amin'ny Governemantan'ny Repoblikan'i Korea sy ny Repoblikan'i Sina nanomboka tamin'ny, monja taorian'ny nanorenana ny Repoblika Voalohany.
Rehefa ny Sinoa Ady an-trano tamin'ny, ny Repoblikan'i Korea foana ny fifandraisana amin'ny ROC (tia Tanindrazana any Shina). Ny fifandraisana ara-diplaomatika eo amin'ny Korea Atsimo sy Nasionalista Sina (Taiwan) dia faranana amin'ny telo amby roa-polo volana aogositra, dia nanaraka ny koreana Tatsimo ny fankatoavana ny Repoblika entim-bahoakan'i Sina (PRC, Kaominista any Shina) sy ny fananganana ny roa tonta fanekena teo amin'izy ireo.
Samy firenena matanjaka tsy ny fifandraisana ara-diplaomatika.
Korea atsimo dia nandefa miaramila ny Politika Ady fiofanana amin'ny Fu Hsing Kang Oniversite. Ny fizarana ny Korea dia nanaraka ny vanim-potoana ny trusteeship avy tamin'ny Amerikana ny fibodoana tany any atsimo.
Voalohany ity Fifidianana Ankapobeny ny koreana Tatsimo ny lalàm-Panorenana Antenimieram-pifidianana, niorina Voalohany ny Repoblika eo ambany fanaraha-mason'ny Firenena Mikambana.
Ny Repoblikan'i Shina ekena ny Lalampanorenana koreana governemanta ao atsimon'ny ampahany amin ny Koreana Saikinosy ary nanokatra Masoivoho ao Myeongdong, Seoul, tamin'ny efatra janoary, efatra volana aty aorian'ny fametrahana ny Repoblikan'i Korea. Repoblika entim-bahoakan'i Sina (PRC) dia naorina tamin'ny taorian'ny Shinoa ny Ady an-trano sy ny Repoblikan'i Korea foana ny fifandraisana amin'ny Repoblikan'i Shina (ROC), izay ny governemanta nafindra toerana ao Taiwan. Ny Firenena Mikambana dia nanameloka an'i Korea Avaratra ny herisetra ara-tafika manohitra ny Repoblikan'i Korea ao pilaminan'ny Firenena Mikambana fanapahan-Kevitra ary pilaminan'ny Firenena Mikambana fanapahan-Kevitra. Ny ROC no nifidy nankasitraka ny samy Firenena Mikambana fanapahan-kevitra. Nandritra ny Ady koreana, ny ROC nanome fitaovana fanampiana ny ROK, raha ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina nanome Korea Avaratra mpiady ho fanohanana ny Olona ny Tafika mpirotsaka an-Tsitrapo.
Samy ROK sy ROC governemanta manohitra ny sosialisma, ary koa ny Repoblika Demokratika entim-bahoakan'i Korea (DPRK) sy ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina (PRC).
Tsy ROK na ROC fantatra na namorona ny fifandraisana ara-diplaomatika amin'ny DPRK sy ny PRC ny fitondram-panjakana.
Ny Repoblikan'i Korea niresaka momba ny PRC toy ny 'Shina Kaominista', sy ny ROC ho 'tia Tanindrazana any Shina' na 'maimaim-Poana Shina'.
Ny governemanta ny ROC heverina ihany koa ny Repoblikan'i Korea governemanta ho toy ny hany ara-dalàna ao amin'ny fanjakana ny koreana saikinosy. Ny filoha Park Chung-hee dia nitsidika Taipei amin'ny fanjakana fitsidihana tamin'ny febroary, izay naneho ny firaisankinany amin'ny ROC sy Vietnam Atsimo, dia nanambara fa: 'tsy breakwaters izay fotsiny hiarovana ny seranan-tsambo avy amin'ny onrushing onja. Isika dia tsy mbola mitsangana ihany mba ho tsikelikely nampiasaina ny onja ny Kaominisma. Ny Fahenina Repoblikan'i Korea Atsimo furthered ny Fahagagana momba ny Han Renirano ny toe-Karena ao Korea Atsimo ary nanokatra ny diplaomasia mba Kaominista Firenena (anisan'izany ny fanorenana ny fototry ny Inter-koreana ny fifandraisana sy ny fanekena mpiara-misy miaraka amin'ny Korea Avaratra amin'ny alalan'ny miditra ao amin'ny Firenena Mikambana hoe 'any Atsimo' Koreacitation ilaina). Ny filoha Roh Tae-woo ny manaraka ara-politika ny faniriana dia mba hanomboka fametrahana Realpolitik amin'ny firenena mifanolo-bodirindrina ao Avaratra-atsinanan'i Azia. Ao Korea atsimo hetsika lavitra komonista ny politika ivelany mba hanatsarana ny fifandraisana amin'ny manodidina kaominista firenena niteraka ny fahasimban'ny fifandraisana amin'ny ROC. Izany fiovana izany dia nampidirina mba hampitoniana an'i Korea Avaratra sy mora ara-politika ny fanahiana sy manalefaka ny miaramila fihenjanana ao amin'ny Saikanosy koreana Korea nanantena mba hahatonga ny mety milamina firaisana indray ny koreana saikinosy. Toy ny normalization dia nanomboka, ROK nafindra fankatoavana ara-diplomatika avy ROC ny PRC, ary nalain'ny fanjakana ny fananan ny ROC masoivoho, ny famindrana ny PRC. Taiwan dia mpikambana ao amin'ny Fananana Zo Alliance Amin'ny fito ambin'ny folo septambra, ny PRC niala ny fanoherana ny koreana Tatsimo maha-mpikambana azy ao amin'ny Firenena Mikambana. Repoblikan'i Korea no farany Azia firenena amin'ny ara-dalàna ny fifandraisana ara-diplaomatika amin'ny ROC. Ny fanao isan-taona ny varotra boky eo amin'ny Korea Atsimo sy Taiwan dia manodidina dolara AMERIKANA telo-polo tapitrisa, amin'ny semiconductor vokatra ny zavatra lehibe indrindra ao amin'ny varotra tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Toy ny aprily, ny tontalin'ny ny fiaraha-mientana ifampizarana ny fampiasam-bola eo amin'ny roa tonta tonga manodidina ANTSIKA dolara.
efatra arivo tapitrisa ao amin'ny faritra toy ny fitaovam-pifandraisana, ny mpanjifa ny vokatra, ny fitantanam-bola, ny teknolojia vaovao, ny vy, ny fitsaboana, ny vy, ny fiarovana ary ny semiconductor. Taorian'ny Seoul ny fankatoavana ny PRC governemanta ao Beijing, mivantana sidina ara-barotra eo Seoul sy Taipei niasa tamin'ny koreana sy Taiwaney airlines no faranana.
Cathay Pacific sy Thai Airways Iraisam-pirenena na izany aza, niasa ny lalana toy ny Fahadimy ny Fahalalahana sehatry.
Ny fampihenana ny voalahatra sidina nahatonga ny mpizaha tany isa dia avy any Taiwan ho rano indray mitete avy amin'ny, tamin'ny taona hatramin'ny, tamin'ny taona, sitrana ampahany ihany ho, amin'ny taona. Tamin'ny septambra, solontena avy amin'ny firenena roa tonta' tsy ofisialy ny asa fitoriana, ny hoe 'koreana ny asa Fitoriana ao Taipei' sy ny 'Taipei asa Fitoriana ao Seoul' sonia ny fitaterana an'habakabaka fifanarahana mamela fiaramanidina ny lafiny tsirairay hiditra ny airspace ny hafa. Izany dia azo atao ny resumption ny mivantana voalahatra sidina amin'ny alalan'ny koreana sy Taiwaney an'habakabaka malayziana ary koa ny mahazo sidina avy amin'ny Repoblikan'i Korea any Azia Atsimo-atsinanana ny hanidina ny nosin'i Taiwan fa tsy detouring ny tanibe Shina na any Filipina. Mpandalina tombanana izany dia hamonjy ny Repoblikan'i korea zotram-piaramanidina orinasa ₩ lavitrisa (dolara AMERIKANA sivy amby roapolo tapitrisa tamin'ny tahan'ny fifanakalozana) amin'ny resaka vidin-tsolika ny vola lany sy ny hafa saram. Ny Filoha teo aloha Repoblikan'i Korea Kim Tanora-sam nitsidika Taipei nandritra ny dimy andro ny volana jolay. Nandritra izany fitsidihana, nihaona tamin'ny filoha ankehitriny Taiwan Chen Shui-Bian amin'ny sakafo fanasana, fa ny roa ireo dia tsy tonga amin'ny fifanarahana ny teny ny mpiara-tsoratra fanambarana mandrisika ny resumption ny mivantana air travel. Kim nilaza ny masoivoho ao amin'ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina mialoha ny fitsidihany.
Tamin'ny oktobra, ny fanarahana ny fitaterana an'habakabaka fifanarahana, Kim tonga tao Taiwan indray amin'ny Chen ny fanasana.
Hoy ny kabary teo Pirenena Chengchi Oniversite, ary nitsidika seranan-trano tao Kaohsiung, ny rahavavy tanàna Repoblikan'i Korea Busan.
Ny ROK governemanta nanao toy ny interlocutor sy nanohana Taipei ny fieken-keloka ho amin'ny Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tamin'ny taona ho toy ny toe-karena Shinoa.
Repoblikan'i Korea niova ny toetry ny fanafohezan-teny ara-politika ny Firenena Mpikambana ny Mpikambana ao amin'ny toe-karena ao APEC hanaovana ny APEC fomba ofisialy ny Trans-Pacific Economic Forum.
Tao Taipei tamin'ny Minisitry ny Raharaham-Bahiny dia voarara mba handray anjara amin'ny APEC, fa ny Minisitry ny Raharaha ara-Toekarena ny Repoblikan'i Shina, iraka manokana tendren'ny Filohan'ny Repoblikan'i Shina sy ny raharaham-barotra solontena avy amin'ny Repoblikan'i Sina, izay imasom-bahoaka, dia afaka manatrika ny fanao isan-taona APEC Fivoriana eo ambany ny anaran ireo Shinoa Taipei. Taipei atao ihany koa ny hampiantrano ny tsy ahazoana APEC consortiums sy atrikasa momba ny lohahevitra izay Taiwan dia manana hery manokana, toy ny teknolojia sy ny kely sy ny antonony orinasa. Ireo consortia sy ny atrikasa dia natao mba hiresaka afa-tsy ny fahombiazana eo amin'ny toe-karena sy raharaham-barotra-ny olana mifandray amin'ny hafa APEC Mpikambana ao amin'ny toe-karena. Ao Taiwan ny fandraisana anjara amin'ny APEC dia tohanan'i Etazonia sy eken'ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina. Ny APEC ny Raharaham-barotra Karatra Travel (ATBC) tetika mihatra amin'ny raharaham-barotra dia lavitra ny dia avy any Taiwan. Korea atsimo nanohana ihany koa ao Taiwan voalohany ny fandraisana anjara amin'ny OCDE sy ny manaraka ny asa. Repoblikan'i Korea, namerina tsy ofisialy ny fifandraisana amin'ny Repoblikan'i Shina tamin'ny taona, ny lazaina sy ny reciprocally maha-koreana ny asa Fitoriana ao Taipei sy Taipei asa Fitoriana tany Korea. Taipei asa Fitoriana tany Korea, Busan Birao dia hita ao amin'ny faritra atsimo ny ROK. Hatramin'ny taona, misy manan-danja ara-barotra boky eo amin'ny firenena roa tonta. Firenena roa maintsy ifanarahana maharitra andro ny hijanona amin'ny manamarina ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpitsidika avy amin'ny jolay. Ny faha- Seoul-Taipei forum natao tamin'ny oktobra Satria Shina sy Korea Atsimo nametraka ny fifandraisany ara-diplaomatika tamin'ny, mafy Shinoa ara-politika sy ara-toekarena, fitaoman-alefa ny koreana Tatsimo ny governemanta mba miala sasatra ara-bola sy ara-politika ny olana manakatsakana ny Sinoa teratany ao Korea Atsimo hatramin'ny taona, fa mihazona ny Repoblikan'i Sina (Taiwan) pasipaoro, isan'izany ireo naturalized maha-koreana ny olom-pirenena, na maharitra ny mponina, - teny - re-teny fahazoan-dalana, ary zon'olombelona ny fifidianam-bahoaka. Tsy dia hentitra teo fifanakalozana ary misy maro ROC Shinoa iraisam-pirenena ny sekoly ao amin'ny Repoblikan'i Korea.
BUSAN TANÀN-DEHIBE AN-TANÀNA
דרום קוריאנים החוזה דולר מאה מיליון לרכוש - ניו יורק טיימס